စစ်အုပ်စုအတွင်း အာဏာလုပွဲကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စစ်အုပ်စုအတွင်း အာဏာလုပွဲကြီး
Posted by ရွှေဘိုသား on Jul 11, 2011 in Copy/Paste | 14 comments
ကျွန်တော်လည်း www.naytthit.net ဖတ်ရလို. ရွာသားတို.ကို ဖတ်စေချင်တာနဲ. ကူးယူပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ
ရွာရဲ. နံပါတ် ၄ စည်းကမ်းကို မလိုက်နာဘူးပြောလည်းခံရမှာပါပဲ ကျွန်တော်ဖတ်ပြီး ရွာသားတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ရပါတာ
ဖတ်ပြီးသား သိပြီးသား ရွာသားတွေကိုတော.အချိန်ကုန်အောင်ပြုလုပ်မိတဲ.အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်
ကျွန်တော်.၀မ်းနည်းမိတာကတော. ရေ၀ဲဂရက် ထဲကျတဲ.လူလို ကျွန်တော်တို. ပြည်သူတွေ ၀ဲလည်လည် ဖြစ်နေမှာကိုပဲစိုးရိမ်မိပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် မှေးမှိန်စပြုလာသော စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဟောင်းတရပ် ကွယ်ပျောက်၍ ဒီမိုကရေစီကို အာမခံသော သမ္မတ သိန်းစိန်နှင့်အတူ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရသစ်တရပ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ တပြိုင်တည်းမှာပင် တစုံတရာပြောင်း လဲမှုကိုလိုလားသော သမ္မတ သိန်းစိန် နှင့် ရှေးရိုးစွဲတရားသေမူဝါဒကို လိုလားသော ဒုသမ္မတ တင်အောင်မြင်ဦး တို့၏ အာဏာလွန်ဆွဲပွဲကြောင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများ လက်တွေ့မပြနိုင်ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ် သည်။
မူလလက်ဟောင်း စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် ၀န်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့သော သိန်းစိန် အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ဖေါ်ဆောင်ရေးတွင် အခက်အခဲများတွေ့ရမည်ကို အများကမျှော်လင့်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အချို့ သံတမန်များ အဆိုအရ အဓိကပြသနာသည် တင်အောင်မြင့်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် ၀င်ရောက်နှောက်ယှက်မှုနှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အပေါ် အာဏာပြလိုမှုမှာ အဓိက အခက်အခဲများဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် သမ္မတ ၏ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်လွှတ်ပေးရေးတို့တွင် အကောင်အထည်မပေါ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
တင်အောင်မြင့်ဦး သည် စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်သော အယူအဆဟောင်းကို စွဲကိုင်သူ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှ ပျောက်ကွယ်ခဲ့သော်လည်း သန်းရွှေ သည် သိန်းစိန်၊ တင်အောင်မြင့်ဦး လွန်ဆွဲပွဲကို စံနစ်တကျ စီမံထားခဲ့သည်။ အာဏာလုပွဲ ကြီးထွားလာသည့်နှင့် စစ်တပ်က တကျော့ပြန် အာဏာသိမ်းပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ရပ်ဆိုင်းပစ်နိုင်သည်ဟု စိုးရိမ်သူများလည်း ရှိသည်။
ပိုမို၍ ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်မှာ အာဏာရ ကြံ့ဖွံပါတီခေါင်းဆောင်များကလည်း ၎င်းတို့၏ သြဇာအာဏာများ ချဲ့ထွင်လာ မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ် နိုဝင်ဘာ ရွှေးကောက်ပွဲကြောင့် အနားယူခဲ့ကြရသော ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ လည်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် စစ်အစိုးရဟောင်း၏ ၀န်ကြီးများလည်းဖြစ်ကြပြီး ဒီမိုကရေစီ အရေးအပေါ် တွင် သံသယရှိနေကြသူများလဲ ဖြစ်သည်။
သန်းရွှေအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးမှ အပြီးအပိုင်အနားယူသွားသည် ဆိုသော်လည်း ၎င်း၏ ဓါတ်ပုံများကို အစိုးရရုံးများတွင် ချိတ်စွဲထားဆဲ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အခန်းကဏ္ဍကို ကျော်၍ သိန်းစိန်အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲရှိသည်။ ယနေ့ ဖြစ်ပေါ် နေသော အာဏာလွန်ဆွဲမှုသည် တပ်မတော်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး မိမိ မိသားစု၏ ရပ်တည်နိုင်မှုနှင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတို့ကို အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေရန် သန်းရွှေ ၏ စနစ်တကျဖန်တီးခဲ့သော အရှုပ်ဇာတ်လမ်းတခု ဖြစ်သည်။
သိန်းစိန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ စီပွားရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးတိုတွင် တစုံတရာပြောင်းလဲမှု လိုအပ်သည်ဟု မြင်သူဖြစ် သည်။ အမည်မဖော်လိုသူ မြန်မာသံအရာရှိ တဦးအဆိုအရ စစ်အစိုးရ၏ စံနစ်ဟောင်းသည် ကွယ်ပျောက်သွားပြီဖြစ် သည်။ အစိုးရသစ်သည် အပြုသဘောပြောင်းလဲမှုကို လိုလားသည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်း၏ အဆိုကို အာရှနှင့် ဥရောပနိုင် ငံများရောက် မြန်မာသံအရာရှိများကလည်း ထောက်ခံကြသည်။ မတ်လတွင် ဟောပြောခဲ့သော သမ္မတမိန့်ခွန်းများက လည်း ဤအချက်များကို သက်သေခံစေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အများအုပ်ချုပ်သော စံနစ်တရပ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားဥပဒေရေး၊ စစ်တပ်အဆင့်ဆင့်ကြားတွင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရေးမှာ ထင်သလောက်မလွယ်ပေ။
သုံးသပ်သူများအလိုအရ ကုန်သွယ်ရေးကောင်စီ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော တင်အောင်မြင့်ဦး အနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေကို အမြတ်ထုတ်ပြီး သိန်းစိန်၏ အခွင့်အာဏာနှင့် ဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ အပတ်စဉ် ပြု လုပ်သော အစိုးရလုပ်ငန်းစဉ် အစည်းအဝေးများပြီးတိုင်း တင်အောင်မြင့်ဦး သည် ၀န်ကြီးများ (သိန်းစိန် မပါ) ၀န်ကြီး များကို လ္ဘက်ရည်သောက်ဖိတ်ပြီး အတွင်းရေးများကို မေးမြန်းလေ့ရှိသည့်ဟု ဆိုသည်။ အဓိကအားဖြင့် မိမိအတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိသော အဓိက စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ ဥပမာ သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် လိုင်စင်နှင့် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ခွင့်များကို တင်အောင်မြင့်ဦး က အာဏာသုံးပြီး လုပ်ကိုင်လေ့ရှိသည်။ ဖြစ်ရပ်တခုတွင် သိန်းစိန်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၅% ပြည်ပပို့ကုန် အခွန်လျော့ချရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တင်အောင်မြင့်ဦး က ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးနှင့်ပေါင်းပြီး ၇% ပြောင်းလဲထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် မိမိ သဘောဖြင့် ၀န်ကြီးဌာနများ၏ ဘတ်ဂျက်များကို ၂၀% မှ ၄၀% လျော့ချခဲ့သည်။ သို့သော် စစ်တပ် ဘတ်ဂျက် မပါချေ။
တင်အောင်မြင့်ဦး သည် ကြံ့ဖွံအစိုးရကို နိုင်ငံတကာတွင် သိက္ခာကျဆင်းစေသော ပြောဆိုမှုများ ပြောလေ့ရှိသည်။ အ ထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာ အကြီးအကဲများ John McCain ကဲ့သို့ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်များ နေပြည်တော်သို့ လာရောက် လည်ပတ်စဉ်က ‘မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များမရှိပါ’ ဟု မိုက်မဲစွာ ပြောဆိုခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက အတိအကျပြောဆိုတင်ပြထားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော် ကိစ္စကို ပြောင် ကျကျ ငြင်းဆိုဝံသူ ဖြစ်သည်။
အဓိကအကျဆုံး ကိစ္စသည် မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင် စစ်တပ်၏အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ တပ်မတော် သည် ပါလီမန်၏ အမတ်နေရာ ၂၅ % ကို ပိုင်ဆိုင်သူ ဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အသစ်ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်နိုင် အခန်းကဏ္ဍနှင့် စစ်တပ်ကပါဝင်သော ပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ယနေ့ ကျင်းပနေသော ပါလီမန်အစည်းအဝေများတွင် မရှိသလောက် ဖြစ်သည်။ ပါလီမန် လွှတ်တော်တွင် ဗိုလ်ချုပ် မင်းအောင်နိုင် ၏ ပြောဆိုမှုများကို လေ့လာပါက ၎င်း၏ နိုင်ငံရေးတာဝန်သည် တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန် ထူထောင်ရန် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သောခန်းကဏ္ဍမှာ မြန်မာပြည်အနာဂါတ်ကို ကိုယ်စားပြုသော ကျွမ်းကျင်သော မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သမားများ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်လွှတ်တော် အမတ်တဦး၏ အဆိုအရ –
ယနေ့ ဖြစ်ပျက်နေသော နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေး အရှုပ်အထွေးများမှာ စစ်အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်ကြောင့်သာ ဖြစ်သည်ဟု အ တိအကျ ဝေဖန်ခဲ့သည်။
တင်အောင်မြင့်ဦး အနေဖြင့် ကန့်သတ်ခံနေရသော ယနေ့ စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ မကျေမနပ်ဖြစ်နေပြီး စစ်တပ်အနေဖြင့် အစိုးရနှင့် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးတွင် ထိရောက်စွာ ဖိအားပေးရန်လိုသည် ဟု မြင်သူ ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော် ရက်သတ္တအနည်းငယ်အတွင်းက တင်အောင်မြင်ဦးသည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို ၎င်း၏ ရုံး သို့ ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ နိုင်ငံရေး တည်ဆောက်ပုံ၊ စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် မိမိ၏ အရေးပါပုံနှင့် သိန်းစိန် အနေဖြင့် စစ်တပ်နှင့် မသက်ဆိုင်တော့ကြောင်းကို ညွှန်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။
ကြံ့ဖွံအမာခံများမှာ အများစုသည် စစ်တပ်မှနှုတ်ထွက်၍ အရပ်သားအဖြစ် ပြောင်းလည်းထားသူများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ သည် ပါလီမန်အမတ်များအနေဖြင့် ပါလီမန် တွင်မိမိ တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဆောင်ရွှက်ရာတွင် လှစ်လျှုရှု ခံရမှုများကြောင့် မကြေမနပ်ဖြစ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် မူလလက်ဟောင်း သန်းရွှေ အစိုးရနှင့် နောက်ကွယ်တွင် ပြောဆိုတိုင်တန့်မှုများ ရှိနေကြသည်ဟု ဆိုသည်။ အတိအကျအားဖြင့် ၎င်းတို့ သည် သန်းရွှေနှင့် နိုင်ငံတော်၏ ဦးသျောင်အဖွဲ့တရပ်ကို ထူထောင်၍ အစိုးရအသစ်ပေါ်တွင် ထိန်းချုပ်နိုင်သော အဖွဲ့ တရပ်ကို ထူထောင်ရန် အကြံပြုခဲ့သည်။ ကြံ့ဖွံ့ခေါင်းဆောင် အောင်သောင်းနှင့် ဌေးဦး တို့ကလဲ သန်းရွှေကို တရုတ် ပြည်က တိန်ရှောက်ပင် နှင့် စင်္ကာပူက လီကွမ်းယူ တို့ကဲသို့ နောက်ကွယ်ကထိန်းချုပ်သော အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရာထူး ကို ထားရန်က နဦးက အကြံပြုခဲ့ဖူးသည်ဟု ဆိုသည်။ အချို့သောသုံးသပ်သူများ၏ အဆိုအရ သန်းရွှေ သည် တိုင်း ပြည်၏အာဏာကို နောက်ကွယ်မှ ထိန်းချုပ်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ၀န်ကြီးများအနေဖြင့် နေ ပြည်တော်ရှိ သန်းရွှေ ၏ နေအိမ်သို့ ပုံမှန်သွားရောက်တွေ့ဆုံနေကြရဆဲ ဖြစ်သည်။
မြန်မာထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်း အောင်လင်းထွဋ် အဆိုအရ သန်းရွှေ သည် နိုင်ငံတော်၏ အာဏာကို သမ္မတ သို့မဟုတ် ပါလီမန်သို့လွှဲအပ်ပေးမည်သူ မဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည် နိုင်ငံတော်၏အာဏာကို နောက်ကွယ်မှ ဆက် လက် ကြိုးကိုင်ထားမည့်သူဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။
လက်ရှိအနေအထားတွင် ဤပြသနာများသည် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအေရေးတွင် လက်တွေကြုံကြိုက်နေရသော် နိုင်ငံ ရေး အရှုပ်အထွေးတရပ် ဖြစ်သည်။ သိန်းစိန် အနေဖြစ် ပါလီမန်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သော သူရရွှေမန်း တဦးသာ ၎င်း၏ မဟာမိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိသည်။ ရွှေမန်း သာလျင် နိုင်ငံရေးစံနစ်ကို ပါလီမန်၏ ထိရောက်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အကူအညီပေးနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ရွှေမန်းသည် တင်အောင်မြင့်ဦး နှင့် စီးပွားရေးပြိုင်ဘက်တဦး ဖြစ်သည်ကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်သည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအနာဂါတ်သည် အထက်ပါအာဏာလွှန်ဆွဲပွဲ၏ အဆုံးအဖြတ်ပေါ်တွင် မူတည်နေသည်။ သိန်းစိန် အနေနှင့် စနစ်သစ်တရပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် ကျိုးစားနေချိန်တွင် တင်အောင်မြင့်ဦး သည် လက်ရှိအနေအထား ဖြစ်သော စစ်တပ်လွှမ်းမိုးသော နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ဖတ်တွယ်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ အာဏာလွန်ဆွဲမှုကြောင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် နောက်ဆုံးတနေ့တွင် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးလိုအပ်ချက်ကို အကြောင်းပြု၍ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ရပ်ဆိုင်းကာ အာဏာသိမ်းမှုများ မပြုလုပ်ဟု မည်သူမျှ အာမမခံနိုင်ပေ။
မှတ်ချက် ။ ။ (လယ်ရီဂျာကင် ဆောင်ပါးကို wfww မှ ဘာသာပြန်ဆိုထားသည်) လယ်ရီဂျာကင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ BBC ၏ သတင်းထောက်တဦး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ယနေ့တွင် ၎င်းသည် ဘန်ကောက်အခြေစိုက် ပုဂ္ဂလ သတင်စာ ဆရာတဦး ဖြစ်သည်။
တင်အောင်မြင့်ဦး ( Shit Lone) တရုပ်ပြည်အတွက် သူလျှိုလုပ်နေ တယ်။ မြန်မာပြည်ကမြေတွေကို နာမည်မျိုးစုံနဲ့ တရုပ်ပြည်ကို ရောင်းပေးနေတယ်။ ပဒုံမာကွင်းကိုဝယ်လိုက်တဲ့ ဒေါက်တာကိုကိုကြီး နောက်မှာ ထွန်းမြင့်နိုင် ရှိတယ်။ ထွန်းမြင့်နိင်နောက်မှာတရုပ်ရှိတယ်။ တရုပ်ကလုပ်နိုင်အောင် တင်အောင်မြင့်ဦးက တိုင်းပြည်ကိုသစ္စာဖေါက်ပြီး လုပ် ပေးနေတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
၀န်ကြီးဌာနတွေအားလုံးကို shit lone က ထိမ်းချုပ်ထားတယ်။ ကာကွယ်ရေးကလွဲလို့ ကျန်ဝန်ကြီးဌာနတွေကို ဘတ် ဂျက်တွေ ဖြတ်တောက်လိုက်တယ်။ တချို့ဝန်ကြီးဌာနတွေဆိုရင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း အဖြတ်ခံရတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့က ဆုံး ဖြတ်ချက် ချပြီးသား၊ သတ်မှတ်ပြီးသားဘတ်ဂျတ်တွေကို တင်အောင်မြင့်ဦးက ကာလုံဝန်ကြီးဌာနကနေ ပြန်ပြင်တယ်။ ထင်သလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဒါကြောင့် ၀န်ကြီးဌာနတွေက ဘာမှလုပ်လို့ မရနိုင်တော့ဘူး။ အစိုးရအဖွဲ့ မှာ ငွေမရှိဘူး။ ရေနံ၊ ကျောက်စိမ်းတွေ ရောင်းရတဲ့ ငွေတွေကို သန်းရွှေ အဖွဲ့က ထိမ်းချုပ်ထားတယ်။ သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက် ယူတာရယ်၊ နေပြည်တော် တည်ဆောက်စဉ်က အကြွေးတွေကိုဆပ်နေရတာတွေကြောင့် အစိုးရအဖွဲ့မှာ ၀င်ငွေမရှိတော့ဘူးလို့ သိရတယ်။
နောက်သတင်းတခုကတော့ စစ်တိုင်းမှုးတွေကို ပတ်လည်ရွှေ့ပြောင်းတာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တိုင်းမှူး ထွန်းသန်းကို ဖိအားပေးပြီး နှုတ်ထွက်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့ သိရတယ်။ သူက မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ပိုမိုနီးစပ်လာလို့ ဖြစ် တယ်လို့ ဆိုတယ်။ လဘ်စားမှုကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တာလို့ သတင်းလွင့်ထားတယ်။ ဒါဆိုရင် တင်အောင်မြင့်ဦး ကို ရှေ့ဆုံးကဖြုတ်သင့်တယ်လို့ ၀န်ထမ်းတွေက ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုရွှေ့ပြောင်းမှုတွေကို တင်အောင်မြင့်ဦး (ကာလုံ-၀န်ကြီးဌာန) က လုပ်ခဲ့တာလို့ ဆိုတယ်။ သမ္မတ သိန်းစိန် နဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင် တို့ဟာ အရုပ်တွေမျှသာဖြစ်ပြီး တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လုပ်နေတာကတော့ တင်အောင်မြင့်ဦး၊ ခင်အောင်မြင့်၊ လှထွန်း နဲ့ ကျော်ဆန်းတို့ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို လေးဦးဂိုဏ်းလို့ ၀န်ကြီးတွေက နောက်ကွယ်မှာ ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲနေကြပါတယ်။
wakawaka7 ကသာတောင်းဆိုတာဗျ တင်ရတာကလည်း ခပ်လန်.လန်.ပဲ
နံပါတ်4စည်းကမ်း ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတင်ရတာမို. သူကြီးက ထိပ်တုံး ခတ်မှာလည်းကြောက်ရသေးတယ်
သူကြီး ထိပ်တုံး သော.ပျောက်နေတဲ. အချိန်လေးတွေတော. ခိုးပြီးတင်ပေးပါ.မယ်ဗျာ
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေရဲ့ ကံကြမ္မာကိုက တော်တော်ဆိုးကြပါတယ်။
ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမပေးပဲ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ထားလိုက်ရမလား?
ဒီနေရာ မှာတော့ မန်းဂေဇက် တစ်ခုသာ ဖတ်တဲ့ ကျုပ်လို လူအတွက်တော့ ကိုရွှေ ရဲ့ ပို့ စ် ဟာ ဗဟုသုတ တစ်ကယ်ကို တိုးစေပါတယ် ဗျာ ။ ကျေးဇူးပါပဲ
thanksalot.ဦးသိန်းစိန် ကို အကောင်း ဆုံး လုပ် ဆောင် နိုင် မယ် လို့ မျှော် လင့် ပြီး အားပေးပါ တယ်
သဂျီး ထိပ်တုံးလည်း သော့ မကြာ မကြာ ပျောက်ပါစေ…
ဒီလို ပိုစ့်မျိုး မကြာ မကြာ ဖတ်ရပါစေ…
အခုလို အများအတွက်တကူးတက အချိန်ကုန်ခံပီး ကူးတင်ပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိမိရဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့အချိန်ကို အများအတွက်အသုံးချပေးတာလို့ ယူဆလိုက်ပါတယ်။သတင်းအမှန်များကို ဆက်လက်ပြီးရှင်သန်စီးဆင်းနိုင်ပါစေ။
ရှစ်လုံး (shit lone) ဟာ အစိုးရသစ်မှာ မကြိုက်သူတွေများတဲ့ကြားထဲက နောက်ဆုံးကပ်မှ ရုတ်တရက်ပါဝင်လာတဲ့သူဖြစ်သလို၊ တပ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေ ရဲ့ ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ အစီအမံလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ.်ရေးဝန်ကြီးရာထူးကို ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်လောက်သာပေးထားပြီး၊ ကာ/ချုပ် မင်းအောင်လှိုင်ကိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ပေးထားတာက အဓိပ္ပါယ်အများကြီးရှိပါတယ်။ စစ်တပ်ကို အရပ်ဖက်နဲ့ မရောအောင်လဲအထူးသီးသန့်ခွဲထားတာလဲ အကြောင်းရှိပါတယ်။ အချိန်မရွေး ကခဖန်ထိုးနိုင်ဘို့ ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အင်အားအချိနဲ့ဆုံးအခြေခံဥပဒေ ဖြစ်သလို ပျော့ကွက်ဟာကွက်တွေ များစွာရှိတာကတော့ လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလိုထင်ရှားပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် လက်ရှိအစိုးရ သက်ဇိုးရှေမရှေ ဆိုတာတော်တော်သံသယ ရှိစရာပါဘဲ။ ပြည်နယ် နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တွေ နဲ့ ဗဟိုအစိုးရရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဟာ ခုထိမရေမရာသေးပါဘူး။ သေသေချာချာကြည့်ရင် ဖက်ဒရယ်မူ နဲ့ ပြည်ထောင်စု စနစ်တို့ အကြားမှာရှိတဲ့၊ အန္တရာယ်ရောပြွန်းတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပါဘဲ။
လူထုသန်း(၆၀) ကတော့ သမိုင်းတပါတ်လည်အောင်ခံနေရပါပေါ့လေ။
ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်ရမှာ မင်းအောင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။ နမိတ်တော့ပြနေပြီ၊ ကျပ်ပြေးမင်းတြားကြီးကို အနိုင်ယူမဲ့သူပေါ်နေပြီဗျို့…..
“အစိုးရအဖွဲ့ မှာ ငွေမရှိဘူး။ ရေနံ၊ ကျောက်စိမ်းတွေ ရောင်းရတဲ့ ငွေတွေကို သန်းရွှေ အဖွဲ့က ထိမ်းချုပ်ထားတယ်။ သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက် ယူတာရယ်၊ နေပြည်တော် တည်ဆောက်စဉ်က အကြွေးတွေကိုဆပ်နေရတာတွေကြောင့် အစိုးရအဖွဲ့မှာ ၀င်ငွေမရှိတော့ဘူးလို့ သိရတယ်။”
အဲဒါဖတ်ရတော့ တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်
အဆောက်ဦးကောင်းကောင်း တည်ဆောက်ချင်ရင် အောက်ခံဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းဖို့လိုပါတယ်…။
တိုင်းပြည်ကို အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းသာယာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်ရင် ကောင်းမွန်မျှတတဲ့ အခြေခံဥပဒေ လိုပါတယ်…။
၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေဟာ စစ်တပ်က အစိတ်သား (၂၅%) အဖြစ်မနေ၊ ရာသက်ပန် ရယူထားမှာဖြစ်လို့ အုပ်စုတစ်စုက ကျန်ပြည်သူအားလုံးအပေါ် နိုင်ငံရေးအရ အခွင့်ထူးခံအသာစီးရယူထားတဲ့ တစ်ဖက်စောင်းနင်း အခြေခံဥပဒေပါ…။
Check & Balance မရှိတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့လွှတ်တော်က ဒီလူတွေကို မထိန်းနိုင်ပါဘူး…။
အောက်ခြေစောင်းနေလို့ ကြာလာလေ (အပေါ်ကိုရောက်လေ) စောင်းရွဲ့လာပြီး တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြိုလဲပျက်စီးဦးမှာပါဘဲ…။